Nendlela Phinda kusulwe Amafoto kusuka iPhone
Q: Usanda Ngathola iPhone 4 futhi ngenjabulo snapping away. Nokho, I susa umthwalo ka izithombe ngephutha ukuthi babengafuni ukususa. Angizange wenze Ukusekela ngokulondoloza nge iTunes futhi Photostream noma okunje. Ngakho lokho engingakwenza ukuze uthole izithombe zami emuva.
Q: Ngisanda evumelanisiwe phezu 2,000 izithombe kusuka ikhamera yami roll-iPhone yami 5S (egijima on iOS 8) ukuze iPhoto ku MacBook Pro Snow Leopard. Lapho ngokushesha ucele ususe izithombe efonini, Mina kuchofoziwe yebo. Uhlelo lokusebenza ayisebenzi emva kwesikhashana Ngakho ngiphoqa ukuyeka. Lapho ngiphinda ukuqalisa iPhoto, izithombe babengekho nohhafu izithombe ikhamera yami roll babengasekho. Lapho ngizama ukuvumelanisa iPhoto nge iPhone yami, elikushoyo 0 izithombe. Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe uphinde uzithole?
Izithombe kungukuthi empeleni kusulwe
Ngemva kokuthi ukususe izithombe kwi-iPhone yakho, kungukuthi gone, nje awukwazi ukubona kubo. Ziyakwazi usazoba endaweni ethile ocingweni. Futhi Apple akafuni abantu ukufinyelela idatha izithombe isusiwe. Ngakho sidinga umuntu wesithathu iPhone Data Recovery ithuluzi.
Indlela ukubuyisa imiyalezo evela iPhone
Indlela ukuze alulame othintana elahlekile kusuka iPhone
Ukunaka yakho Sicela!
Ngaphambi kokuthi uqale ukuba alulame idatha, kufanele uqaphele lezi:
Beka iPhone yakho singene flight mode futhi ungasebenzisi it uze uthole lezo izithombe;
Ungavumelanisi iPhone yakho ne-iTunes, iCloud noma amanye amathuluzi third-party, ekugwemeni "Ususiwe izithombe" kube overwritten ngu data entsha.
6 izindlela ukuze alulame izithombe zisusiwe iPhone
Lapha sethula 6 izindlela ukuze alulame izithombe elahlekile noma ususiwe kusuka ku-iPhone. Uyacelwa ukuthi uyifunde bese ukhetha omunye okungase efanelekayo isimo sakho samanje. Phakathi nenqubo yokutakula, kungase kudingeke iTunes noma ICLOUD isipele.
Khiphela izithombe kusuka ICLOUD isipele usebenzisa isofthiwe iPhone Isipele extractor
Khiphela izithombe kusuka iTune isipele nge-iPhone Photo yokutakula ithuluzi
Phinda wezithombe ezisusiwe ngqo ku-iPhone
Buyisa izithombe asusiwe ngokuqondile iCloud (Free)
Buyisela izithombe elahlekile kusuka ku-iTunes isipele (Free)
Buyisela wezithombe ezisusiwe ku-iPhone asebenzisa i-iOS 8 (Free)
Method 1: Khiphela izithombe kusuka ICLOUD isipele usebenzisa isofthiwe iPhone Isipele extractor
Le ndlela isebenza uma abantu balahlekelwa izithombe zabo kodwa une-isipele ICLOUD. Ikakhulukazi kulabo elahlekile iPhone yabo kodwa ufuna ukuthola izithombe emuva. Kuyinto efanelekayo zonke iPhone isizukulwane asebenzisa i-iOS 5 noma kamuva, kuhlanganise iPhone yakamuva 6 Futhi 6 plus.
Sicela download bese ufake iPhone isipele extractor isofthiwe ngaphambi ngokulandela izinyathelo.
Step 1: Khetha imodi alulame futhi Ngena ngemvume iCloud yakho
Ngemuva efakwe iPhone Photo yokutakula, ukujabulisa egijima uhlelo bese ukhetha Imodi nokuvulwa “Buyisa ku ICLOUD Backup Amafayela”, bese ufaka Apple ID yakho nephasiwedi ngemvume. Uhlelo wangayigcina amarekhodi kwi-akhawunti yakho, iphasiwedi noma okuqukethwe nganoma isiphi isikhathi phakathi nokuqulwa zakho.
Step 2: Download nokuhlaziya iCloud zakho zokulondoloza
Uma ungene ngemvume ku-iCloud, lolu hlelo luyoba bhala yonke iCloud amafayela isipele ku-akhawunti yakho. Khetha owodwa muva nje, iningi bese uchofoza Thwebula, bese ukhetha uhlobo amafayela ungathanda ukulanda, Chofoza Next ukuqhubeka. Emva kwalokho, ungakwazi scan okuqukethwe iCloud. Chofoza le Qala Scan inkinobho ukuqala. Kuzothatha isikhathi esithile, sicela ulinde kuze inqubo ukuskena eseqedile.
Step 3: Buka kuqala bese kutholakale izithombe ofuna kusukela isipele ICLOUD
I ukuskena izothatha imizuzu embalwa. Uma izitobhi, ungahlola kuqala yonke idatha kufayela lakho iCloud isipele, efana oxhumana, imiyalezo, izithombe, amanothi nokunye. Hlola nabo uphawu labo udinga. Bese uchofoze Alulame inkinobho ukuzilondoloza kukhompyutha yakho. Uhlelo siyosenza ngabe ufuna ukubeka oxhumana walulama, amanothi kanye nemiyalezo emuva ku-iPhone yakho uma ixhunywe nge computer yakho phakathi kwenqubo yokutakula.
Method 2: Khiphela izithombe kusuka ku-iTunes isipele nge-iPhone Photo yokutakula ithuluzi
Le ndlela kufanelekile labo isipele iPhone yabo ne-iTunes. Uma ushonelwe izithombe zakho, Awunayo iPhone yakho emhlabeni. Noma ifoni yakho eyebiwe. Ufuna izithombe emuva. Ngakho sicela ubheke lapha, sizobe ukwethula ukuthi ungawukhipha kanjani umucwana ifayela iTunes isipele futhi bathole izithombe ofuna. thwebula kuqala iPhone Photo yokutakula ithuluzi. It has Windows version futhi Mac version, sicela uqinisekise thwebula eyiyona.
Step 1: Khetha isipele yakho ye-iTunes futhi kukhishwe khona
Uhlelo futhi ukushintshela kwimodi ye “Lokulungisa iTunes Backup ifayela”. Khona-ke zonke isipele wakho we-iTunes kukhompyutha yakho iyotholakala futhi efakwe ohlwini. Khetha eyodwa ofuna bese uchofoza “Qala Scan” kukhishwe ke.
Step 2: Hlola kuqala bese alulame idatha odlule
Ngemva kwesikhashana, yonke idatha ku ifayela yokusekelayo uzobe ekhishwe futhi uboniswa ezigabeni. It iqukethe kusulwe futhi izinto ezikhona kudivayisi yakho. Ukuhlukaniswa kubo, sicela uvule “ukubonisa izinto ezisusiwe kuphela”. Ungahlola kuqala kubo bese uthikha labo izithombe ofuna. Bese uchofoze “Alulame” Inkinobho. oxhumana nabo, amanothi kanye nemiyalezo kungenziwa ngqo livuke iPhone yakho uma uqhubeka iPhone yakho exhunywe nge computer yakho phakathi kwenqubo yokutakula.
Method 3: scan okuqondile bese alulame izithombe asusiwe ku-iPhone
Le ndlela isebenza iPhone kuphela 4 and iPhone 3GS. Uma ungenalo iCloud eyisipele noma iTunes isipele iPhone yakho, noma kwideskithophu yakho ziphelelwe yisikhathi, ke indlela zokugcina usebenzisa isofthiwe iPhone Data Recovery ukuskena iPhone ngqo futhi sizame ukuthola kwabo. Sicela download bese ufake isofthiwe wokuqala.
Step 1: Xhuma iPhone yakho ukuze PC bese Gijimani lolu hlelo
Xhuma iPhone 4 yakho / 3GS kukhompyutha, futhi uhlelo. Uzobona kuwindo njengoba ngezansi. Shintshela “Mode Okuthuthukisiwe” ngokusebenzisa inkinobho ekhoneni elingezansi kwesokudla.
Uzocelwa ukuba ulandele 3-step isingeniso ukungena kudivayisi ukuskena Imodi. Uhlelo ngeke akucele ukulanda plugin ngaphambi kokungena iPhone kudivayisi ukuskena Imodi.
Step 2: Qala inqubo lokuskena for izici izithombe elahlekile
Ngemuva kokuchofoza “Qala” Inkinobho, bese ulandela izinyathelo ukufaka imodi kudivayisi ukuskena. Uhlelo ngeke ukuhlaziywa iPhone yakho ngoba idatha elahlekile.
Step 3: Buka kuqala bese kutholakale izithombe zisusiwe iPhone
Ngemuva ukuskena, yonke idatha etholakele ayaboniswa izigaba, ungakwazi kuqala izithombe nge khetha Camera Roll noma Photo Stream. Thikha labo ofuna ubuyele bese uchofoza “Alulame” ukuze abasindise kukhompyutha yakho.
Inothi: Izithombe ezitholakala lapha qukethe kusulwe futhi futhi laba ekhona namanje on iPhone. Uma kuphela bafuna ukubona izithombe ususiwe, sehla inkinobho on the top ukuhlukanisa kwazo: “ukubonisa kuphela izinto ezisusiwe.”
Method 4: Buyisa izithombe asusiwe ngokuqondile iCloud (Free)
Le ndlela isebenza kubo bonke iPhone isizukulwane ukugijima iOS 5 noma kamuva. Uma ulahlekelwe izithombe nje ngemva isipele nge-iCloud. Ungakwazi ukubuyisela kusukela iCloud isipele ngqo.
Isibonelo, osanda kusula ezinye izithombe ngengozi, kodwa uke ukusekela ngokulondoloza iPhone nge-iCloud izolo futhi akasidlanga yisiphi isithombe ngemva kwalokho. Khona-ke ungakwazi ukubuyisela lezo zithombe kusukela isipele ngqo. Noma wena safike iPhone yakho intshontshiwe, kodwa ufuna ukuthola izithombe zakho emuva. Uma unezinye kudivayisi ye-iOS efana ne-iPad, ungangena ngemvume ku-akhawunti yakho iCloud kuso, futhi abuyisele izithombe kusukela isipele ICLOUD. Izithombe ngabe ukulandwa kuya ku-iPad. Nazi izinyathelo.
1. Kudivayisi yakho iOS, Yiya Izilungiselelo > General > Isofthiwe yokubuyek. Uma inguqulo entsha ye-iOS iyatholakala, ulandela iziqondiso ezikuskrini ukulanda futhi uyifake.
2. Qiniseka ukuthi isipele yamuva ukubuyisela kusukela.
Yakho ye-iOS 8 Idivayisi: Yiya Izilungiselelo > ICLOUD > Storage > Phatha Isitoreji, bese wengeza i-idivaysi ohlwini ngaphansi Izipele ukubona usuku Usayizi isipele yayo yakamuva.
Yakho ye-iOS 7 Idivayisi: Yiya Izilungiselelo > ICLOUD > Storage & isipele > Phatha Isitoreji, bese wengeza i-idivaysi ohlwini ngaphansi Izipele ukubona usuku Usayizi isipele yayo yakamuva.
3.Yiya Izilungiselelo > General > Hlela kabusha, Bese uthepha “Sula Konke kanye Izilungiselelo”.
4. Esikhathini Umsizi Isethaphu, uqhubekele “Setha idivayisi yakho”, uyathinta Buyisela kusuka Backup, bese ungena ngemvume ku-iCloud.
5. uqhubekele “Khetha isipele”, bese ukhetha kusuka uhlu izipele etholakala iCloud. Khona idatha ku ifayela yokusekelayo babeyobuyiselwa efonini yakho.
Inothi: Ngaphambi ukubuyisa kusuka ICLOUD isipele, uzoba ukusula konke okuqukethwe kanye nezilungiselelo kusuka ku-iPhone yakho. Ungahle ulahlekelwe idatha yakho entsha kanye nezilungiselelo.
Method 5: Buyisela izithombe elahlekile kusuka ku-iTunes isipele (Free)
Le ndlela isebenza zonke kudivayisi ye-iOS. Uma ungazange ukuvimbela othomathikhi ukuvumelanisa kukho kuma-iTunes, kuzodala isipele sonke isikhathi uma synched iPhone yakho nge computer yakho. Ungakwazi kalula ukubuyisa izithombe nalabo izipele.
1. Xhuma iPhone yakho kukhompyutha has ifayela lakho yokusekelayo.
2. Qalisa iTunes. Qinisekisa kuba inguqulo yakamuva ye iTunes.
3. Ngemuva iTunes waqaphela iPhone yakho, chofoza inkinobho Buyisela yokusekelayo, noma ukhethe Ifayela > Amadivayisi > Buyisela kusuka Emuva up. Uma usebenzisa iTunes 10.7 noma ngaphambi kwalokho, kwesokudla chofoza idivaysi ohlwini bese ukhetha Buyisela kusuka Backup.
1. Ngaso sonke isikhathi kufanele ugcine isipele yakho ye-iTunes usesikhathini. Noma ungase ulahlekelwe idatha yakho entsha bese izilungiselelo kusukela iPhone ngabe ayosuswa ngokugcwele futhi ubuyele emuva isimo odlule.
2. Akukho izindlela kuqala okuqukethwe kule isipele, futhi awukwazi ukukhetha ukuze siphinde sithole ingxenye kubo. Nanti iphuzu engicabanga iPhone Isipele extractor owenza kangcono ukwedlula iTunes.
Method 6: Buyisela wezithombe ezisusiwe ku-iPhone asebenzisa i-iOS 8 (Free)
Okwamuva iOS 8 has a umsebenzi omusha ku Photo lokusebenza. Ungase wathola kukhona kumafolda amabili olusha olubizwa ngokuthi “kamuva” Futhi “Okusanda Kususwa” ngaphansi albhamu. Njengoba leli gama lisikisela, izithombe Usanda uku “kamuva” ifolda kuyilapho nenye ifolda “Okusanda Kususwa” kugcina okwesikhashana zithombe zisanda ozususile. Ngakho, uma nje wena ukuthi usule izithombe zakho noma izithombe ngephutha, ungakwazi kalula zibuye. Thepha “Okusanda Kususwa” ifolda bese ukhetha omunye udinga. Bese uthepha “Alulame”. Izithombe wawuzothuthwa endaweni yayo yasekuqaleni.
Indlela Buyisa esusiwe imiyalezo kusukela iPhone
Indlela ukubuyisa idatha iPhone emva jailbreak
Nendlela Phinda kusulwe Amafoto kusuka iOS 8
[Ixazululwe] iPhone washaya mode alulame
Posted on September 19, 2015 September 20, 2015 Umbhali WillIzigaba iOS Data RecoveryAmathegi IPHONE Isu lokuthola kabusha, alulame izithombe isusiwe iPhone, alulame izithombe isusiwe iPhone 4, alulame iPhone izithombe
Langaphambilini post Previous: Indlela Phinda Isuse Izithombe kudivayisi yakho ye-Android
Next post Next: Indlela Buyisa esusiwe imiyalezo kusukela iPhone